Kheladi - ललित दाइ, ढल्केको पोस्ट र सागरको गोल
स्व. पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसँग स्व. ललित कृष्ण श्रेष्ठ (दायाँ)
(कान्तिपुर दैनिकका सहायक सम्पादक हुन्, हिमेश । उनी प्रायः फुटबलमा रिपोर्टिङ गर्ने गर्छन् । दिवंगत ललितकृष्ण श्रेष्ठसँग नजिकको सम्बन्ध भएकामा पर्छन् उनी । धेरैलाई जस्तो हिमेशका लागि पनि उनी ललित दाइ नै थिए । नेपालले मैत्रीपूर्ण खेलका लागि सन् २०१४ मा इन्डोनेसियाको भ्रमण गर्दा त्यस टिमका प्रमुख थिए, उनै श्रेष्ठ । यही टिममा पत्रकारका रूपमा सहभागी थिए हिमेश । त्यतिबेला उनीहरूबीच लामो कुराकानी भएको थियो । यो विषयमा केन्द्रित रहेर । के थियो त यो ? हिमेशसँग कुराकानीका आधारमा)
सागर थापाको त्यो गोल, ओहो । सागरले हजार बदमासी गरे होलान्, हदकै बदमासी पनि गरे । तर ती सबै त्यो एक गोलका लागि माफी दिन योग्य हो कि जस्तो पनि लाग्छ । जतिबेला नेपाली फुटबल र अन्तर्राष्ट्रिय यात्राको चर्चा हुनेछ, त्यही एक गोलको प्रसङ्ग कहिले छुट्ने छैन । छुटे अन्याय हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा नेपालले जति पनि गोल गरे, त्यो जत्तिको अब्बल दर्जाको गोल कहिल्यै भएन । नेपालका लागि यो नम्बर एक गोल थियो भन्दा हुन्छ ।
‘मेरो पनि यो प्रिय गोल हो । मैले फुटबल खेलेर सबैभन्दा ठूलो उपहार केही पाएको छु भने त्यही गोल हो जस्तो लाग्छ,’ सागरसँग कुरा गर्न पाएका बेला भावनात्मक हुने गर्छन् र भन्छन्, ‘फुटबलमा मैले धेरै नै उतारचढाव देखें होला, तर जतिबेला त्यो गोल सम्झन्छु मन खुसी हुन्छ । यो मैले निकालेको गोल हो र यसले मेरो परिचय पनि बनायो ।’
यु–ट्युबमा यो गोल राखिएपछि यसलाई हेर्नेको संख्या अत्यधिक बढेको थियो । भ्युअर संख्या पनि लाखौं नै पुग्यो । फिफाले वर्षको सर्वाधिक उत्कृष्ट गोलका लागि दिने पुस्कास अवार्डका लागि पनि यो गोलको मनोनयन हुनुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग पनि उत्तिकै उठेको थियो । सन् २०११ को डिसेम्बर ४ । नयाँ दिल्लीको जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम । साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको अवसरको थियो । त्यो दिन नेपालले बंगलादेशको सामना गर्दै थियो ।
त्यो गोललाई त्यस वर्ष पूरा विश्व फुटबलकै उत्कृष्ट गोल घोषित हुनुपर्छ भनेर सामाजिक सञ्जालतिर आवाज पनि सुनिए ।
दुवैका लागि त्यो लिग चरणको दोस्रो खेल थियो । नेपालले आफ्नो पहिलो खेलमा माल्दिभ्ससँग १–१ को बराबरी खेलेको थियो । बंगलादेश भने पाकिस्तानको हातबाट गोलरहित बराबरीमा रोकिएको थियो । दुवैलाई त्यो दिनको खेलमा जित आवश्यक थियो । हारको अर्थ हुन्थ्यो, प्रतियोगितामा लगभग चुनौती समाप्त । बंगलादेशविरुद्धको त्यो खेलमा नेपालको नतिजा खराब भए फेरि सेमिफाइनलको समीकरण खराब हुने तय थियो ।
खेलको निर्धारित ९० मिनेट सकियो । गोल भएन । इन्ज्युरी समय ५ मिनेटको थियो । त्यो पनि अन्त्यतिर थियो, त्यसमा पनि गोल हुने छाँट थिएन । तर खेलको अन्तिम केही सेकेन्डमा त्यो भयो, जसको कल्पना प्रायः फुटबलमा गरिन्न । नेपाल इकाउन्टरको प्रयासमा थियो । जगजित श्रेष्ठले यसक्रममा रविन श्रेष्ठलाई पास दिन खोजे । बल पाएयता रविन छलाउने प्रयास गर्दै थिए । बंगलादेशी डिफेन्डर मोहम्मद मामुनले उनीमाथि फाउल गरे ।
ठीक त्यही बेला सागरको मनमा के चलेको थियो, उनी सम्झन सक्दैनन् । तर पछाडिबाट यति कराएको भने पक्कै सुने, लामो हान्नु । यो स्वर थियो, सहायक प्रशिक्षक मेघराज केसीको । सायद सागर चाहन्थे, आफूले प्रहार गरेको फ्रि–किकमा कसैले हेड गरे हुन्छ । बल बंगलादेशको पेनाल्टी एरियामा खस्ने हो भने केही हुनसक्ने हो कि भन्ने आशय थियो होला उनको । नभन्दै, सागरले लामो शक्तिशाली प्रहार गरे । तत्काल भारतीय कमेन्टेटरको मुखबाट यस्तो सुनियो, ‘वेस्टेड फ्रि–किक’ ।
रेफ्री भारतका सन्तोष कुमार थिए । रेफ्रीले मामुनलाई पहेँलो कार्ड पनि देखायो । यस्तोमा नेपाललाई बंगलादेशको आधा भागबाट फ्रि–किकको अवसर प्राप्त भएको थियो । लगभग ४५ यार्डको दूरी थियो होला । रेफ्रीले मध्यभागको छेउबाट नेपाललाई बल चलाउने अवसर दिलायो । खेल सकिन केही सेकेन्डमात्र बाँकी थियो । दुवै टिम एक प्रकारले तनावमा थिए । बराबरीले दुवैलाई फाइदा थिएन । फ्रि–किक प्रहार गर्न तम्सिए, कप्तान सागर ।
अर्थात बेकारमा गएको फ्रि–किक । तर उनको यो भनाइ भुईंमा पनि खस्न पाएको थिएन, बलले मज्जाको यात्रा तय गर्दै अकल्पनीय काम गर्यो । बंगलादेशी गोलरक्षक सहिदुल आलम साहेल केही हदसम्म आफ्नो ‘पोजिसन’ मा थिएनन् । बलले उनलाई पनि बिट गर्दै पोस्टको दिशा लियो । त्यो जादुयी गोल थियो । पूरा बंगलादेशी टिम स्तब्ध बन्यो । उनीहरूसामु कुनै प्रतिक्रिया दिने अवसर पनि थिएन । खेल तुरुन्तै सकियो पनि ।
लेखक हिमेश ।
यता नेपाली टिमको खुसीको सीमा थिएन । नेपाली टिमका प्रशिक्षक थिए, ग्राहम रोबर्टस । पोस्टम्याच कन्फ्रेन्समा उनको फूर्ति देखिनसक्नु थियो । सायद सागरभन्दा पनि बढी कोही बढी खुसी थिए भने ती रोबर्टस थिए । उनी यस्तो भन्न पनि पछाडि परेनन्, ‘मैले यत्तिको राम्रो गोल कहिल्यै देखिनँ । यत्तिको सुन्दर गोल कहिल्यै भएन कि ?’ बंगलादेशी प्रशिक्षक थिए, मेसोडेनियाका निकोला लेभेस्की । सायद रोबर्टसको तुलनामा बढी सटिक प्रतिक्रिया उनले दिएका थिए ।
उनका प्रत्येक शब्द तौलिएका थिए । लेभेस्कीको भनाइ थियो, ‘यो गोलले बंगलादेशी फुटबललाई रूवाएको छ । तर यस्तो गोल एक जुगमा एकैपल्ट मात्र हुन्छ । जसले यसलाई प्रत्यक्ष हेर्न पाए ती सबै भाग्यमानी रहे ।’
काठमाडौं फर्केयता सागरको प्रतिक्रिया थियो, ‘भगवानकै कृपाले गोल भएको हो ।’ सबैलाई थाहा छ, सागर मिडियासँग मज्जाले बिरलै बोल्छन् । बोले पनि नितान्त अपेक्षित विचार मात्र । खेल चलिरहेका बेला सायद सागरलाई नराम्रोसँग भोक लागेको हुनुपर्छ ।
खासमा सागरले जुन स्थानबाट फ्रि–किक प्रहार गरेका थिए । त्यसको लगभग छेउमै थियो नेपाली पत्रकारको एक समूह । सँगै प्लयेर्स बक्स र मैदानबाट बाहिरिने बाटो पनि । सागर खेल सकेयता नेपाली पत्रकारतिर हुँदै बाहिरिए र पत्रकारलाई दिइएको स्न्याक्सको बाकस एउटा उठाए । सागरको भनाइ थियो, ‘लास्टै भोक लागेको छ ।’
सागर नेपाली घरेलु फुटबलमा पनि बिरलै गोल गरेका छन्, आखिरमा उनी डिफेन्डर त रहे । भलै, उनले आफ्नो खेलजीवनको सुरुआत फरवार्डका रूपमा गरेका थिए । उनको यो गोल विशुद्ध डिफेन्डरका रूपमा हो । यसै गोलको दुई अर्को पाटो पनि जोडिएर रहेको छ । पहिलो पाटो, यो धेरैलाई थाहा नै छैन ।
यो गोल नेपाली फुटबलले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखेको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा राम्रो गोल थियो, यसमा कुनै दुईमत नै हुन सक्दैन ।
दोस्रो, यो केहीलाई थाहा छ, तर धेरै लेखिएको छैन । पहिलो, गोल जति अविश्वसनीय छ, त्यससँग जोडिएको घटना पनि उत्तिकै पत्याउन गाह्रो छ ।
यसलाई पहिलोपल्ट सुन्दा यस्तो पनि हुनसक्छ र भन्ने प्रश्न उठन सक्छ । तर, यस्तो भएको साँचो हो ।
डिसेम्बर ४ को त्यस खेलको बिहानै नेपाली फुटबल टिमका केही पदाधिकारी जवाहरलाल नेहरु स्टेडियम घुम्न गएका थिए । खासमा उनीहरूको उद्देश्य मैदान कस्तो छ भनेर बुझ्नु थियो । एक प्रकारको जासुसी काममा निस्केका ती पदाधिकारीमा एक थिए ललितकृष्ण श्रेष्ठ । अर्को उपेन्द्रमान सिंह । ललितकृष्ण नेपाली टिमका टोली नेता नै थिए । उपेन्द्रमान भने गोलकिपर प्रशिक्षक । तिनले के पाए भने मैदानको एक छेउमा रहेको गोलपोस्ट आफ्नो स्वाभाविक स्थितिमा थिएन ।
पोस्ट पछाडितिर ढल्केको थियो । पोस्टले जुन स्थानमा भुईं छुनुपर्ने थियो, त्यो ठीक थियो । तर माथितिर भने यो धेरै हदसम्म पछाडि ढल्केको थियो । ‘यस्तो पनि हुन्छ र भने ?’ ललितकृष्णले प्रश्न गरेका थिए उपेन्द्रमानतिर फर्केर । उत्तर आयो, ‘अहँ, यस्तो त मैले कहिल्यै देखेको पनि छैन । अझ सुनेको पनि छैन । यस्तो त अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा हुनै सक्दैन ।’ उनीहरूको समान निचोड थियो, ‘यसले बल पोस्टमा छिर्ने सम्भावना बढाउने गर्छ ।’
किनभने यसले पोस्टको मुख केही हदसम्म ठूलो पारेको थियो । अब प्रश्न उठ्न सक्छ, जवाहरलाल नेहरु स्टेडियममा रहेका ग्राउन्ड्सम्यान यो किन देखेनन् ? म्याच रेफ्रीले कसरी देखेनन् ? खेल सुरु हुनुअगाडि एसिस्टेन्ट रेफ्रीले पोस्टलाई निरीक्षण गर्ने गर्छन्, उनीहरूले कसरी हेक्का राख्न सकेनन् ? हुँदा हुँदा दुवै टिमका गोलरक्षकले पनि देखेनन् त ? खासमा नेपाली टिमका केही खेलाडीले यसलाई देखेका रहेछन्, तिनले पनि बढी टाउको दुखाएनन् र चुपचाप खेले ।
सागरलाई भने त्यसबारे केही थाहा थिएन । सागरको त्यस गोलमा पोस्टको त्यो स्थितिले पनि कुनै न कुनै रूपमा सहयोग गरेको थियो कि ? त्यसको उत्तर सागरले आफ्नो त्यस गोललाई लिएर दिएको प्रतिक्रिया जस्तै छ । अब त्यसको उत्तर भगवानले मात्र दिन सक्नेछन् । तर ललितकृष्ण र उपेन्द्रमानलाई पनि मनैमन डर थियो, कतै यो तथ्य कसैले थाहा पायो भने ? दुवैले चुपचाप बस्ने निर्णय गरे । आखिरमा नेपालले खेल जितेको थियो, दुवै स्वाभाविक रूपमा खुसी मनाउनै व्यस्त रहे ।
त्यो खेलको भोलिपल्ट बिहानै ललितकृष्ण फेरि मैदान भने पुगे । उनमा कौतूहल थियो, पोस्ट के अझै त्यही स्थितिमा छ त ? थिएन । पोस्टलाई मिलाइसकेको थियो । अब त्यो दुरुस्त स्थितिमा थियो ।
ललित दाइलाई फुटबलले न्याय गरेन जस्तो लाग्छ